अंकिता लोखन्डे सुशान्त सिंह राजपूतलाई सम्झेर रुन्छिन्!के हो त उनिहरुको सम्बन्ध ? – www.agnijwala.com
अंकिता लोखन्डे सुशान्त सिंह राजपूतलाई सम्झेर रुन्छिन्!के हो त उनिहरुको सम्बन्ध ?
पवित्र नाता : अंकिता लोखन्डे र स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपुत को ‘अर्चना’ र ‘मानव’ को पात्रहरु बीच वास्तविक र रिल जीवन को बीच धेरै कम अन्तर थियो।
अंकिता लोखन्डे सुशान्तलाई सम्झन्छन्
आफ्नो सम्बन्ध को बारे मा विशेष कुरा बताइन
नयाँ शो १५ सेप्टेम्बर बाट सुरु हुनेछ
वास्तविक र रील लाइफ को बीच को रेखा अक्सर अंकिता लोखंडे र दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत को पात्र अर्चना र मानव को बीचमा धमिलो थियो। टिभी सिरियल ‘पवित्र रिश्ता’ २०० in मा प्रसारण सुरु भयो। सुशान्त, जो शो को मुख्य लीड थिए, गत बर्ष जून १४ मा मृत्यु भयो। शो ‘पवित्र रिश्ता २.०’ को नयाँ सिजन रिलीज भैरहेको छ, सुशान्तकी अभिनेत्री, प्रेमिका र सह-कलाकार अंकिता भन्छिन् कि उनी शो को माध्यम बाट सुशान्त को याद लाई जीवित राख्न को लागी कोशिश गरीरहेकी छिन्। ।
सिरियल मा उनीहरुको सम्बन्ध को जादू
अंकिताले आईएएनएसलाई भने कि हाम्रा प्रशंसकहरु ‘मानव’ र ‘अर्चना’ बीच के देखे माया थियो। सायद यही कारण हो कि दुई पात्रहरु को बीच रसायन शास्त्र यति जादुई लाग्यो। जब सुशान्त र म शो को लागी काम गर्न थाले, सबै कुरा एक धेरै जैविक तरीका मा बनाइयो। तपाइँ बल द्वारा यस्तो जादू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्न। दर्शकले मेरो र सुशान्तको बीचमा जे देखे त्यो शुद्ध प्रेम थियो।
जब म सेट मा गए, यो यस्तो थियो
जब म फेरी शो को नयाँ सिजन को शूटिंग को लागी सेट मा गए, एक हजार चीजहरु मेरो दिमाग बाट जाँदै थिए। म ‘Pavitra Rishta’ र पछिल्लो 12 बर्ष को लागी यसको सबै यादहरु संग बाँचिरहेको छु। तर यस पटक, जब म सेट मा फर्किएँ, सुशान्त मसंग थिएनन् भन्ने थाहा पाएर, मलाई कस्तो लाग्यो वर्णन गर्न गाह्रो थियो। मलाई थाहा छैन कि कसैले मेरो मन को स्थिति बुझ्नेछन्, तर म यसलाई शब्दहरुमा व्याख्या गर्न को लागी कहिल्यै सक्षम हुने छैन। यस पछि अंकिता रुदै रोए।
सुशान्त हेरेको जस्तो लाग्छ
अंकिताले थप भने कि तर मलाई सधैं लाग्छ कि सुशांत हामी सबैलाई हेरिरहेका छौं, जसरी हामी शो बनाइरहेका छौं र म जान्दछु कि सुशान्त मप्रति धेरै गर्व हुनु पर्छ। ‘मानव’ सुशान्त द्वारा बनाईएको थियो र म शो को माध्यम बाट आफ्नो विरासत लाई जीवित राख्न को लागी कोशिश गर्दैछु। हेर, कोहि पनि उनको उपस्थिति को प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनन्, यो सुशांत हो वा ‘मानव’, जसरी उसले त्यो चरित्रमा जीवन सास फेरी।
यस्तो छ शाहीर बाट अपेक्षा
अंकिता अगाडि भन्छिन्, ‘म पक्का छु कि मैले सुशान्त संग साझा गरेको रसायन कहिल्यै कसै संग साझा गर्न सकिदैन, तर हामी अर्को’ मानव ‘बनाउन सक्छौं, हैन? जब सुशान्त र म काम गर्न थाल्यौं, हामीलाई थाहा थिएन कसरी हाम्रो अन-स्क्रिन ‘जोडी’ लाई स्वीकार गरिनेछ। तर यो भयो। मलाई आशा छ कि नयाँ सिजनमा पनि यस्तै हुनेछ किनकि शाहीर एक राम्रो अभिनेता हुन् र उनी कडा मेहनत गरिरहेका छन्।
सेप्टेम्बर १५ बाट रिलिज हुनेछ
‘पवित्र रिश्ता २.०’ को नयाँ सिजन १५ सेप्टेम्बरमा ZEE5 मा रिलिज हुनेछ। शाहीर शेख नयाँ सिजनमा ‘मानव’ को भूमिका खेल्नेछन्। असंवेदनशील मिडिया कभरेज, मिडिया ट्रायल, सोशल मिडिया मा लगातार ट्रोलिंग र अस्वस्थ विषाक्त वातावरण अघिल्लो बर्ष सुशान्त को अचानक मृत्यु पछि अंकिता सहित सुशान्त संग सम्बन्धित सबै लाई असर पारेको कारण उनी सोशल मिडिया मा ट्रोल भए।
अंकिता हरेक पटक ब्रेक
जब उनी सोध्छिन् कि उनी कसरी पछाडि फर्केर हेर्दा सम्पूर्ण परिस्थिति बताउँछिन्, अंकिताले जवाफ दिए कि जब म ती पुराना एपिसोडमा फर्कन्छु, म आफैं र सुशान्त सँगै देख्छु, पक्कै म धेरै भावनाहरु, उतार चढावहरु बाट गुज्रन्छु। माया अझै पनी छ र यो सधैं हुनेछ। म अझै पनी बिस्तारै बिच्छेद गर्छु तर मलाई थाहा छ कि मँ अनुभव संग बढ्नु पर्छ र कम्तीमा भगवान लाई धन्यवाद कि मँ बाँचिरहेको जिन्दगी जिउने मौका दिनुभएकोमा।